Creepy Castle ehluleka ngokudabukisayo lapho nomzamo wawo balethusele kodwa izilo zawo kunalokho cute ngifuna kanye kungenzeka ekutholeni 3,247 izikhathi esigxotsheni wakho ngokuqinisekile siwenze bezijabulisa slot ifoni amakhasino umdlalo.
Mayelana unjiniyela Creepy Castle
Yaqalwa ngo 2014, Ithuba iyinkampani entsha kodwa inkampani ukwenze isiqalo othembisayo emkhakheni wemidlalo inthanethi ngokuthuthukisa ezinye Chic kakhulu futhi sici-ecebile imidlalo inthanethi. Lokhu amakhasino slot ifoni Umdlalo omunye umdlalo enjalo akhiwa Ithuba (NYX).
Lokhu amakhasino slot ifoni Umdlalo iza itolitji emihlanu futhi umdlalo udlalwa ku 25 paylines. Kodwa lezi paylines kungukuthi fixed kanye zingandiswa noma kwehle njengoba ngamunye okukhethayo. Inani ukuthi ukugembula spin ngalinye futhi fixed kanye iqala kusukela 25p ukuba £ 625 spin ngayinye. Lokhu amakhasino slot ifoni Umdlalo ingadlalwa ezintweni eziningi amadivayisi njenge-iOS, Android, futhi ngokusobala PC kanye laptop. Une izilo ezine ezahlukene zamahlaya isitayela izithombe esikrinini. Ziyakwazi Ballie, itshe, Tally futhi Squido. Kukhona ezinye izimpawu ikhadi ejwayelekile kusukela 9 ukuze Ace kanye futhi zifanekisela ongaphakeme ukukhokha izimpawu. logo Umdlalo sika liwuphawu chitha yomdlalo. Uyobona zasendle njalo esikrinini ukuthi ubuyisela konke okunye ngaphandle uphawu chitha.
I nezinye izici zalesi amakhasino slot ifoni game:
Okungahleliwe Monster Wilds- Noma yimuphi ezilo ezine siziguqukele endle ngezikhathi ngesikhathi umdlalo isizinda. Ungaba abantu abaningi kangangokuthi abane wilds okungahleliwe kule mdlalo isizinda. I wilds okungahleliwe Uzothatha ezinye izimpawu eziyisisekelo ukuze ukukhokhelwa ephakeme akunike.
Creepy osebenzisa Isici- Landing ezintathu noma ngaphezulu izimpawu chitha kuphi umbono ngesikhathi esifanayo omula lesi sici. Isibalo chitha izimpawu ezingavunyelwa uqale lesi sici ngeke ukucacisa inombolo osebenzisa free uthola.
3 Usakaza uyokuvuza ngokuhle 10 osebenzisa free
4 Usakaza uyokuvuza ngokuhle 12 osebenzisa free
5 Usakaza uyokuvuza ngokuhle 15 osebenzisa free
Ngaphambi kokuba uqale ukudlala osebenzisa free udinga ukukhetha iminyango kusukela iminyango ayisithupha samanje esikrinini ukukhulula izilo yokucasha. Lokhu kuzoqhubeka kuze kube usuthole zonke izilo ezine noma kuze uthole osebenzisa Creepy ngasemnyango uma isici kuzoqala. Ezilo ezikhishwe iphenduke wilds isikhathi kwesici.
Creepy Castle kuyinto okusabekayo ezinezihloko slot wagcwalisa fun-kusukela Chance Interactive. I slot imayelana wilds okungahleliwe futhi osebenzisa Creepy lapho ungathola khona i ukukhokhelwa enkulu.